Global Voices teny Malagasy » Ankizy Kambodziana miaraka aminà Sabatra, Basy, ary Tononkalo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Desambra 2018 17:28 GMT 1	 · Mpanoratra Beth Kanter Nandika miora
Tamin'ny herinandro lasa teo no nakan'i Jinja  ity sarin'ankizilahy kely Kambodziana roa mitana basy kilalao any amin'ny araben'i Phnom Penh ity. Na dia nilalao basy ihany aza i Jinja fony fahakeliny, noeritreretiny fa manahiran-tsaina kely ihany ny fahitàna azy ireo satria ohatra ny tena izy ireto basy!
Andro vitsy lasa izay, nanoratra bilaogy i Chlim01 is Bored  mikasika vaovao iray momba ireo ankizy sy tanora nifamono tamin'ny Sabatranà Samurai, naharatrana ankizilahy kely iray 10 taona ary nanaitra nandritra ny fotoana fohy ny olona nipetraka tany aminà tanàna kely iray. Nosamborin'ny mpitandro filaminana ireo ankizy niaraka tamin'ny sabatra. Mpanjifa ny fandaharanasa tsy miankina miady amin'ny rongony, Mith Samlanh  (rohy maty), avokoa ireo ankizy ireo ary an-dàlam-pialàna tsikelikely amin'ny fiankinandoha amin'ny rongony. Mampanontany tena hoe taiza no nahazoan-dry zareo sabatranà Samurai?
Na eo aza io lohatenin-gazety io, fantatra tsara amin'ny asany miaraka amin'ireo ankizy tsy manan-kialofana ao Kambodza  io fikambanana io ary iray amin'ireo fikambanana roa tsy miankina sahy miara-miasa amin'ireo mpiankin-doha amin'ny rongony  anatin'ity firenena ity. Notononin'ireo mpila ravinahitra any ivelany anatin'ireo bilaogy, tahaka ny Sweet Cucumber  (rohy maty) sy ny Jungle Blog  (rohy maty), ny fandaharanasan'ny Mith Samlanh. 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/01/130126/
 Chlim01 is Bored: http://chlim01.blogspot.com
 vaovao iray : http://www.taipeitimes.com/News/world/archives/2005/11/06/2003278978
 Mith Samlanh: http://www.streetfriends.org/
 ankizy tsy manan-kialofana ao Kambodza: http://www.talesofasia.com/cambodia-lifeonthestreets.htm
 sahy miara-miasa amin'ireo mpiankin-doha amin'ny rongony: http://cambodiamorning.blogspot.com/2005/08/deportees-fighting-addiction-where-few.html
 Sweet Cucumber: http://www.sweetcucumber.com/archives/000029.html
 Jungle Blog: http://jungle-bar.blogspot.com/2005/01/aids-orphans-turn-to-streets-for.html
 Tharum : http://tharum.blogspot.com